A Special Event at the Secretariat! — Nicco
A Special Event at the Secretariat!
Nicco Myanmar is very proud to have been selected to the Myanmar Pride Market at the Secretariat on October 3, 4,5and 6; from 2-8 p.m. This special market will feature vendors from both Yangon Farmers' Market and The Makers Market.
For those who have never found the chance to visit our showroom, don't miss this special opportunity to see our products up close as well as to discuss your furnishing needs with our specialists. For four full days we will be conveniently located downtown, so pop on by and check us out! You can takealook at our vases, linen, carpets, coffee tables, lamps, table runners, and much more.
To learn more, contact us at 09979539207. Our Than Lyin showroom will still be open during these days as well so feel free to check these out as well. Note that we will not be able to bring along big furniture items, as our space is limited by booth size.
ရန်ကုန် ဝန်ကြီးများရုံးမှာ ကျင်းပမယ့် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ထုတ်ကုန်များ ပြပွဲကြီးမှာ NICCO အနေနဲ့ ပါဝင်ခွင့်ရလို့ အထူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ထိုပြပွဲကြီးမှာ Yangon Farmers Marketနဲ့ The Markers Market မှ လုပ်ငန်းရှင်များပါ ပါဝင်ရောင်းချကြမှာဖြစ်လို့ အလွန်စည်ကားပြီး ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ကို တစ်နေရာထဲမှာ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခွင့်အခါကောင်းကို စောင့်မျှော်နေတဲ့ Customersများ အတွက် သတင်းကောင်းဖြစ်လို့ NICCOမှ ကူညီမျှဝေပေးပါရစေ။ အချိန်ကတော့ Octoberလ 3ရက်နေ့မှ 6ရက်နေ့ နေ့လည် 2:00မှ ညနေ 6:00အထိ လေးရက်တိုင်တိုင် ပြသရောင်းချသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
NICCO က ငြိမ်သက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုနှစ်ချိုက်တဲ့အတွက် Showroomကို သန်လျင်မှာ ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Customersများအတွက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကြောင့် မရောက်ဖြစ်တဲ့အခါ ယခုလာမည့် ကုန်စည်ပြပွဲမှာ လွယ်လင့်တကူ အရောက်လှမ်းလာနိုင်တာကြောင့် ဝမ်းမြောက်စွာ ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ NICCOရဲ့ ထုတ်ကုန်များနဲ့ အရည်အသွေးကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကြည့်ရှုလေ့လာပြီး သင့်အိမ်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး ပရိဘောဂ အပြင်အဆင်ကို ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ ပွဲတော်လေးရက်စလုံးမှာ ရှိနေမှာဖြစ်လို့ သင့်အတွက် အဆင်ပြေဆုံး တစ်ရက်ကို ရွေးချယ်ကာ အရောက်လှမ်းလာခဲ့ပါ ချစ်သော Customer...။ သစ်သားပရိဘောဂများသာမက အိပ်ယာခင်း၊ ကော်ဇော၊ မီးအိမ်၊ စားပွဲခင်းမှစ၍ အ်ိမ်တစ်ဆောင်အတွက် လိုအပ်ရာရာများကိုပါ ရွေးချယ် ဝယ်ယူမှာယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက 09979539207သို့လည်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ပွဲတော်ကာလအတွင်းမှာလည်း သန်လျင်Showroomက ဖွင့်လျက်ရှိတာကြောင့် နှစ်နေရာလုံးမှာ သင့်အတွက် လိုအပ်ရာရာများကို စုံစမ်းဝယ်ယူမှာယူနိုင်ပါတယ်။ နေရာအခက်အခဲကြောင့် ထုတ်ကုန်ပြပွဲကို ပစ္စည်းကြီးကြီးမားမား မယူလာနိုင်တာကိုတော့ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ပွဲတော်မှာတွေ့ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ချစ်သောအဝယ်တော်
Joah McGee September 26, 2019
Joah McGee October 7, 2019
What to do in Than Lyin?
Joah McGee September 20, 2019